Maitiro ekubata bhatiri muiyo iPhone 11, iPhone 8, SE nevamwe vane iOS 14.5 | IPhone nhau
Inobata sei bhatiri muiyo iPhone 11, iPhone 8, SE nevamwe vane iOS 14.5
Zvakajairika kuti uzive nezvebhatiri kunwa kwemidziyo yedu pavanogamuchira vhezheni itsva. Mubvunzo unogara wakafanana, ko iyo iPhone ine iOS xx inobata sei bhatiri? Zvakanaka zvinoita sekunge iyi vhezheni yeIOS 14.5 ine yakanaka mamiriro maererano neiyo Hupenyu hwebhatiri pane iPhones dzekare.
Kana tichitaura nezve maPhones ekare tinoreva iyo iPhone 11, iyo iPhone 8 uye iyo iPhone SE. Iyo iPhone 12 mukufungidzira kuva yazvino uno haifanire kunge iine matambudziko ebhatiri, asi kana chiri chokwadi kuti mamodheru pamberi peaya iPhone 12 akatambura zvishoma bhatiri kunwa mushure mekuuya kweIOS 14, Matambudziko epamusoro ekushandisa bhatiri akagadziriswa neiyo nyowani iOS 14.5?
Kuuya kweIOS 14.4 kunogadzirisa mamwe matambudziko mukuzvimiririra kwemidziyo iyi asi iyi vhezheni itsva inoita kunge yakavandudza nguva iyi zvishoma. Zvirinani izvi zvinoratidzwa muvhidhiyo yakagadzirwa neAppleBytes, imomo enzanisa nekushandisa bhatiri kweiyo iPhone SE, 6S, 7, 8, XR, 11 uye SE 2020 neiyo RC vhezheni ndiyo yekupedzisira.
Mune ino kesi iyo iPhone 11 yakawana nguva yekumhanya yemaawa mashanu nemaminitsi makumi mashanu neIOS 5 yakaiswa, nepo bvunzo imwechete paIOS 54 bhatiri rakagara maawa mashanu nemaminitsi makumi matatu nemashanu. Asi nezvakaipa iPhone XR yakatora maawa mashanu nemaminitsi gumi paIOS 5 maringe nemaawa mashanu nemaminetsi makumi maviri nemasere yakasvika paIOS 10.
Zvirinani kuona iyo vhidhiyo yese uye kutarisa kuzvitonga kwevamwe mamodheru asi zvinoita sekunge havazi vese vakafara nekuuya kweIOS 14.5, sezvazvakaitika payakaburitswa kuIOS 14. Mamwe mamodheru anoita kunge akarasikirwa nehumwe hutongi zvichienzaniswa neshanduro dzakapfuura, asi haina kunyanyisa, saka ngatitarisirei kuti Apple inokwanisa kugadzirisa kuzvitonga kuzere muiyo iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Inobata sei bhatiri muiyo iPhone 11, iPhone 8, SE nevamwe vane iOS 14.5
Apple inojekesa kuti nei vamwe vashandisi vasingakwanise kubatidza kuvharirwa kwekutevera kweApp